Kaankarada Dhuunta Ilmogaleenka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Marcus Frånberg
Kaankarada Dhuunta Ilmogaleenka
La daabacay torsdag 22 september 2011 kl 10.20
Dib u dhac ayaa ku yimiday tallaalka hablaha ee cudurka kaankarada dhuunta ilmo-galeenka, middaasina oo masuuliyaddeedu saaran tahay hayadda maamulka caafimaadka gobollada. Arrintaa ayaa ka dambeeysay kolkii ay shirkad ka mid ahayd shirkadihii dawooyinka tallaalka qandaraaska ku doonayay ee ku waayay ay sheegtay inay abiil ka qaadan doonto.
Tartanka qandaraaskan ayuu u dhaxeeyay labada dawo ee Gardasil iyo Cervarix.
Qandaraaskii koowaad ayay ku guuleeysatay dawadda Cervarix oo dabadeed abiil laga qaatay maadaama uu dhacay khalad maamul, halka qandaraaskii labaad ey ku guuleeysatay dawada Gardasil oo marka laga yimaado dawaynta cudurka kaankarada dhuunta ilmo-galeenka haweenka sidoo kale wax tar u leh cudurka lagu kala qaado galmada ee lagu magacaabo kondylom.
Shirkadda Glaxo Smith Kline, ee soo saarta dawada Cervarix, ayaa maanta ku qortay war-geeyska DN inay abiil ka qaadan doonto go'aanka qandaraaskaa lagu gaaray.
Hayadda maamulka caafimaadka ee gobollada ayaa muddo saddex sannadood iminka laga joogo go'aan ku gaartay in la talaalo dhammaan hablaha dhashay laga bilaabo sannadkii 1999, waana hayadda ka masuulka ah tallaalada. Go'aanka hayadda ayaa ku salaysan in lagu badbaadin karo talaalkaa boqol ruux sannadkii.